महिनावारीले घर छोड्नु पर्दा...- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
व्यक्ति : हिमालको नयाँ 'हिरो'
लाहुरे जीवन त्यागेर पर्वतारोहणमा होमिएका म्याग्दीका निर्मल पुर्जा ६ महिना ६ दिनमा ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला सबै (१४) हिमाल आरोण गरी रेकर्ड बनाएर विश्वमै चर्चित बनेका छन् । पहिलाको झन्डै आठ वर्षको रेकर्डलाई सात महिनामा छोट्याएका उनको यो कस्तो सफलता हो त ?
कार्तिक १६, २०७६ राजु घिसिङ
अन्नपूर्ण क्षेत्रले पदयात्रामा विश्वलाई नै मन्त्रमुग्ध पार्दछ । अन्नपूर्ण बेस क्याम्प (एबीसी) बाट ३६० डिग्रीको कोणमा देखिने हिमालहरू साह्रै लोभलाग्दा छन्  । एबीसीबाट सामुन्ने देखिने त्यही हिमालहरू छिचोल्दै शिखरमा पाइला राख्न भने अत्यन्तै खतरनाक हुन्छ ।
यस क्षेत्रमा अक्टोबर २०१४ को हिमपात र हिमपहिरोमा पदयात्री र आरोही गरी ४३ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । करिब ५० जना बेपत्ता भएका थिए । ५ सय बढीको उद्धार गरिएको थियो ।
माउरिस हर्जोग नेतृत्वको फ्रान्सेली टिमले ८,०९१ मिटर अग्लो अन्नपूर्ण सन् १९५० मा चढेको थियो । ८ हजार मिटर अग्ला हिमालको पहिलो सफल आरोण त्यो नै हो । त्यसको तीन वर्षपछि मात्रै तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र एडमन्ड हिलारीले विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको चुचुरोमा पाइला राखेका थिए । अन्नपूर्णको आरोहणलाई मृत्युसँग पनि दाँजिन्छ । इतिहासले त्यस्तै देखाउँछ । अन्नपूर्ण आरोहणमा हर्जोगसहित १९१ जनाले सफलता पाएका छन् । आरोहणको प्रयासमा ६१ जनाले ज्यान गुमाए । यो हिमालबाट १ सय जना आरोही फर्किंदा औसत ३४ जनाको उतै श्वास रोकिएको तथ्यांक छ । त्यसैले अग्ला हिमालको सूचीमा दसौं नम्बरमा रहे पनि अन्नपूर्णलाई आरोहणका लागि सबभन्दा खतनाक मानिन्छ ।
म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका ३, दानामा जन्मिएर चितवनको रत्ननगरमा हुर्किएका निर्मल पुर्जा मगरले २०१७ मा १० घन्टा १५ मिनेटभित्रै सगरमाथा र ल्होत्सेको आरोहण गरे । त्यसको पाँच दिनभित्रै मकालु चढ्दा पनि थकान महसुस गरेनन् । त्यसैले उनले एउटा निक्कै महत्त्वाकांक्षी सपना देखे, ८ हजार मिटर अग्ला सबै (१४) हिमाल आरोहण गर्ने । त्यो पनि ७ महिनाभित्रै । आठ हजार अग्ला सबै हिमाल चढ्ने पहिलो व्यक्ति इटालियन पर्वतारोही रेनोल्ड मेसनर हुन् । अक्सिजनबिना निस्किएका उनले १६ वर्ष लगाएर त्यो अभियान १९८६ मा पूरा गरेका थिए । त्यसको अर्को वर्ष पोल्यान्डका जर्जी कुकुज्का पनि ‘एट थाउजन्डर्स’ बने । अक्सिजन सिलिन्डर उपयोग गरेका उनले ७ वर्ष ११ महिना १४ दिन लगाए । दक्षिण कोरियाली किम चाङ—होले उनको रेकर्डलाई ७ वर्ष १० महिना ६ दिनमा छोट्याइदिए २०१३ मा । उनले पनि मेसनरलेजस्तै आरोहणको बेला अक्सिजन लिएनन् । त्यसैले पुर्जाको योजना बन्यो कुकुज्काको रेकर्ड तोड्ने ।
बेलायती सेनाको नेपाली पल्टन (ब्रिगेड अफ गोर्खाज) मा २००३ मा भर्ती भएका पुर्जाले गत वर्ष आफ्नो महत्त्वाकांक्षी सपनालाई योजनामा बदले । युद्धको मोर्चामा होमिएको सैनिकभन्दा हिमालतिर उक्लिने पाइलामा बढी साहस र बहादुरी ठान्न थाले । सानैदेखिको लाहुरे हुने सपना साकार भएपछि कमब्याट छोड्न पनि तयार भए । ब्रिटिस स्पेसल फोर्सअन्तर्गत स्पेसल बोट सर्भिस (एसबीएस) सम्म पुगेका उनले आफ्नो अभियानको नाम दिए, प्रोजेक्ट पोसिबल । प्रायोजन र सहयोग जुटाए । गोफन्डमीमा दर्ता गरे । ७ लाख ५० हजार पाउन्ड जुटाउन असम्भव देखियो । खर्चै नपुग्ने भयो । लाहुरको कमाइले जोडेको बेलायतको घर बेचे । र, स्वदेश फर्केर अभियान थाले त्यही खतरनाक अन्नपूर्णबाट । २३ अप्रिल २०१९ मा शिखर चुमे ।
अन्नपूर्णको आरोहण सोचेजस्तो कठिन नभएको पुर्जाले बताए । त्यसले उनलाई आत्मविश्वासी बनाइदियो । उनी पहिलादेखि नै आफ्नो क्षमतामा विश्वस्त गर्थे । आफ्नो अभियानबारे भनेका पनि थिए, ‘म कुनै रेकर्ड बनाउन आरोहण गरिरहेको होइन, मानवको क्षमता देखाउन चाहन्छु । मेरो प्रतिस्पर्धा मसँगै हो । म्याग्दीको सानो गाउँमा जन्मेको थिएँ । म यो सावित गर्न चाहन्छु कि पृष्ठभूमिले कुनै फरक पार्दैन । सोचाइ सही छ भने, असम्भवलाई पनि सम्भव बनाउन सकिन्छ । धैर्य र एकाग्रता भयो भने सबै कुरा सम्भव हुन्छ ।’ आफ्नो अभियानबाट तीन कुरा देखाउन चाहेको उनले प्रस्टै भनेका थिए– मानवीय क्षमता, पर्यावरणीय परिवर्तन (क्लाइमपेट चेन्ज) र नेपालको पर्यटनको प्रवर्द्धन ।
आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ हिमालमध्ये ८ वटा नेपालमा, ५ वटा पाकिस्तान र एउटा चीनमा छन् । पुर्जाले पहिलो चरण (२३ अप्रिलदेखि २४ मे) मा नेपालका अन्नपूर्ण (८,०९१ मि.), धौलागिरि (८,१६७ मि.), कञ्चनजंगा (८,५८६ मि.), सगरमाथा (८,८४८ मि.), ल्होत्से (८,५१६ मि.) र मकालु (८,४८१ मि.) एक महिनामै आरोहण गरे । दोस्रो चरण (६—२६ जुलाई) मा पाकिस्तानका नांगा पर्वत (८,१२५ मि.), गासेरब्रम पहिलो (८,०८० मि.), गासेरब्रम दोस्रो (८,०३५ मि.), के टु (८,६१४ मि.), ब्रोड पिक (८,०५१ मि.) चढे ।
स्वदेश फर्केर तेस्रो चरणको यात्रा २३ सेप्टेम्बरमा चो यू (८,१८८ मि.) बाट थाले । चार दिनपछि मनास्लु (८,१६३ मि.) मनास्लु चढे । आठ हजारमध्येका सबभन्दा होचो सिसापाङ्मा (८,०२७ मि.) तिब्बतमा पर्छ । तर, यसको आरोहणमा चिनियाँ सरकारले यो सिजनलाई बन्द गरिदियो । उनी स्पेसल फोर्समा हुँदा सोसल मिडिया चलाउन बन्देज थियो ।
पुर्जाले विशेष स्वीकृतिका लागि ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, फेसबुकमा खुबै लेखे, बोले । हारगुहार गरे । धेरैले आवाज उठाए । त्यही बेला चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ काठमाडौं आइपुगे । नेपाल सरकारको पहलमा चीनले चिनफिङ आएको दुई दिनपछि ‘स्पेसल परमिट’ दियो । उनी तिब्बत हानिए । अन्तत : मंगलबार (२९ अक्टोबर) बिहान सिसापाङ्माको शिखरमा पाइला टेक्दै ६ महिना ६ दिनमा आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला सबै हिमालको आरोहण पूरा गरेर रेकर्ड आफ्नो नाममा बनाए । योजना सात महिनाकै भए पनि सिसापाङ्माको परमिट चाँडै पाएको भए उनले यो समय अझै छोट्याउन सक्थे ।
उनी तिब्बतबाट बुधबार स्वदेश फर्किए । तर, सिसापाङ्माबाट ओर्लिनसक्दै यी ३६ वर्षीय आरोहीको सफलताको खबरलाई विश्वकै चर्चित मिडियाहरूले भाइरल बनाइसकेका थिए । हुन त उनले ‘प्रोजेक्ट पोसिबल’ मा हिमालतिर लाग्नुअघि नै बीबीसी, स्काई न्युज, सीएनएन, एबीसी, एएफपी, एपी, रोयटर्सलगायत चर्चित मिडियालाई अन्तरवार्ता दिइसकेका थिए । त्यसअघि उनी अपरिचित नै थिए । पहिचान थियो त केबल लाहुरेको । उनी अहिले राजधानी फर्कंदा सेलिब्रेटी भइसकेका छन् । विश्वले उनलाई मोटिभेसनल स्पिकर देख्न थालिसकेका छन् । उनले भने अर्को सपना देखिसकेका छन्, के टु विन्टरमा चढ्ने । सगरमाथापछिको अग्लो हिमाल के टु विन्टरमा अहिलेसम्म कसैले आरोहण गरेका छैनन् ।
'नो न्युज इज गुड न्युज’
शारीरिक रूपमा निर्मल निक्कै बलिया छन् । यसमा लाहुर भर्ती र ब्रिटिस स्पेसल फोर्सको योगदान मान्छन् उनी । आँटिला भएर पनि हुन सक्छ, उनलाई धेरैले घमण्डी भन्छन् । आँटेको कुरा पूरा गर्ने हिम्मत उनमा छ ।
पर्वतारोहण नसाजस्तै मान्नुपर्छ । ज्यानको जोखिम भएको थाहा पाएर पनि पर्वतारोहीहरू हिमालतिरै पाइला चालिरहन्छन् । कीर्तिमानीहरू कुकुज्का ल्होत्सेमा १९८९ मा बिते । किमले अन्तिम श्वास गत वर्षमात्रै अन्नपूर्णको छिमेकी हिमाल गुर्जमै फेरेका थिए । त्यसैले एक अन्तरवार्तामा पुर्जाकी पत्नी सूचीले आफ्नो पतिलाई हिमालतिर उक्लिँदा कसरी पर्खने भन्ने प्रश्नको जवाफ दिएकी छन्, ‘नो न्युज इज गुड न्युज ।’ सूची उतै (बेलायत) बस्छिन् ।
निर्मल पुर्जाको अनुहार बेर्दा र बोली सुन्दा लाग्छ, सबै निश्चित छ, कुनै शंका वा डर छैन । तर, जस्तोसुकै रेकर्ड बनाए पनि उनी मानवीय गुण भएका व्यक्ति नै हुन् । परिवारबारे निर्मलले भनेका छन्, ‘सन्तानको योजना बनाएका छैनौं किनकि हिमालमा जति खेर जे पनि हुन सक्छ ।’ हिमालमा देखिने प्रकृतिअघि आफ्नो समस्या समस्या नै होइनजस्तो लाग्छ उनलाई । ‘हिमपहिरो आयो भने कसैले बचाउन सक्दैन,’ उनले भनेका छन्, ‘आफूले सही निर्णय गर्नसक्नुपर्छ ।’ उनले दुईपल्ट हिमपहिरोको सम्भावना भएपछि आरोहण त्यागेका पनि छन् ।
‘निम्स दाइ’ को रूपले चर्चित उनी जिद्दी स्वभावका छन् । त्यसैले त प्रतिघन्टा ७५ किलोमिटरको औसतमा हुरी चलिरहँदा पनि लगातार १५ घन्टासम्म हिमाल उक्लिरहेका थिए । भारतीय सेनाका रिटायर्ड पूर्णबहादुर मगरका पाँच सन्तानमध्ये कान्छो उनी असम्भवलाई सम्भव पार्न चाहन्छन् । दुई दाजुको पथ पछ्याउँदै बेलायती लाहुरे बनेका उनलाई गुरुजी (कमान्डर) ले स्पेसल फोर्समा ‘जान सक्दैन’ भनेको अहिले पनि ताजै छ । गुरुजीले भन्थे— दिमाग हुनुपर्छ । उनले त्यसलाई पोजिटिभ इगोको रूपमा लिए । गोर्खा पल्टनको २ सय वर्षको इतिहासमा स्पेसल बोट सर्भिस (एसबीएस) मा आबद्ध हुने पहिलो नेपाली भएर आफूमा सम्भावना नदेखेका गुरुजीलाई गलत सावित गरिदिए ।
स्पेसल फोर्समा रहँदा उनले चिसो मौसममा पनि युद्ध गर्ने सैन्य तालिम लिएका थिए । उनी ७ वर्षअघि खुम्बु क्षेत्रको लोबुचे (६,११९ मि.) पुगेका थिए । त्यो नै उनको पहिलो हिमाली यात्रा हो । अनि पर्वतारोहरणको हुटहुटी बढ्यो । आठ हजार मिटर अग्लो पहिलो हिमालको रूपमा धौलागिरि चढे २०१४ मा । दुई वर्षपछि विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा २०१६ मा पाइला टेके । युद्धग्रस्त अफगानिस्तानको ड्युटीमा फर्कनुअघि उनी घर बेचेको पैसामा पत्नीलाई मात्रै थाह दिएर सुटुक्कै खुम्बु पुगेका थिए ।
उनले गोर्खा भर्तीको २०० वर्षर् पुगेको अवसरमा सन् २०१७ मा १३ सैनिक आबद्ध ‘गोर्खा एक्सिपिडिसन’ को नेतृत्व नै गरे । उनले सफल नेतृत्व मात्रै गरेनन्, आफैंलाई बचाउन मुस्किल रहेको डेथ जोनमा ज्यान जोखिममा राख्दै ८,४०० मिटरबाट भारतीय एक महिलाको उद्धार पनि गरे । त्यसैले उनले बेलायतको प्रतिष्ठित अवार्ड एमबीई (मेम्बर अफ द अर्डर अफ द ब्रिटिस इम्पायर) महारानी एलिजाबेथ द्वितीयबाट पाए । त्यसपछि उनको नाम थपियो निर्मल पुर्जा एमबीई ।
‘प्रोजेक्ट पोसिबल’ को पहिलो यात्रामै उनले अन्नपूर्ण आरोहण गर्नुबाहेक अर्को मन जित्ने काम पनि गरे, मलेसियन चिकित्सक आरोही चीन वुई—किनको उद्धार । लगातार ४० घन्टासम्म खाना र अक्सिजनबिना फसेका किनलाई उद्धार गरी काठमाडौं पठाइएको थियो । उपचारका क्रममा सिंगापुर फर्के पनि किनको ज्यान जोगिएन । पैसा होइन, ज्ञान दिएर सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने उनले कञ्चनजंगामा आफ्नै अक्सिजन दिएर अर्को आरोहीको उद्धार गरी आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा राखेका थिए ।
पर्वतारोहण एउटा टिम–वर्क पनि हो । निर्मललाई ‘प्रोजेक्ट पोसिबल’ मा राम्रो टिमको साथ रह्यो । ‘निर्मलका लागि एउटा हिमालमा एउटा टिमको व्यवस्था गरिएको थियो,’ प्रोजेक्ट पोसिबलको व्यवस्थापन गरेको सेभेन समिटका मिङ्मा शेर्पाले भने, ‘टिम वर्क राम्रो भयो । उनको स्वास्थ्यले पनि साथ दियो ।’ मिङमा आफैं आठ हजार अग्ला सबै हिमाल चढ्ने पहिलो नेपाली हुन् । उनले त्यो उपलब्धि ११ वर्ष लगाएर २०११ मा पूरा गरेका थिए ।
‘पहिला हिमालमा काम गर्ने जनशक्ति थिएन । एउटै हिमाल चढ्न दुई महिना लाग्थ्यो । निर्मलका लागि हामीले सबै व्यवस्था मिलाएका थियौं । हरेक हिमालमा निर्मल पुग्दा सबै तयार भइसकेको हुन्थ्यो । उनको काम जाने र चढ्ने भयो,’ मिङ्माले भने, ‘निर्मलको सफलता विश्व पर्वतारोहणकै लागि अत्यन्तै ठूलो उपलब्धि हो । नेपालको पर्वतारोहरण र पर्यटनका लागि कोसेढुंगा । यसले हिमाल चढ्दा मरिहाल्छ भन्ने सोचलाई परिवर्तन गर्छजस्तो लाग्छ ।’ रेकर्डबारे उनले भने, ‘पहिला पनि निर्मलजस्तै आरोही नआएका होइनन् तर हामीसँग व्यवस्थापन गर्न सक्ने हैसियत थिएनौं । अब कोही ५ महिनामै चढ्छु भनेर आयो भने व्यवस्थापन गर्न सक्ने भएका छौं, सक्ने नसक्ने भन्ने उसैमा भर पर्ने कुरा हो । निर्मलको रेकर्ड तोड्न चाहनेका लागि बाटो खुला भएको छ ।’
पर्वतारोहरणको कीर्तिमानहरूमा आ–आफ्नै दाबी छ । सत्य आफ्नै ठाउँमा होला । निर्मल पुर्जाको टिममा मिङ्मा डेबिड शेर्पा, गेसमान तामाङ, ग्याल्जेन शेर्पा, लाक्पा डेन्डी शेर्पा र हेलुङ दोर्जी शेर्पा थिए । उनीहरू अनुभवी र कुशल मानिन्छन् । मिङ्माका अनुसार प्रोजेक्ट पोसिबलमा नौ हिमालको आरोहणसँगै मिङ्मा डेबिड शेर्पा सबभन्दा कान्छो एट थाउजन्डर्स भएका छन् । यससँगै एट थाउजन्डर्स नेपाली आरोही ५ जना पुगेका छन्, मिङ्मा, उनका भाइ छाङ दावा शेर्पा, सानु शेर्पा, निर्मल पुर्जा र मिङमा डेबिड । मिङ्माका अनुसार विश्वमा एट थाउजन्डर्स ४४ जना भएका छन् ।
सन् १९८० को दशकमा हिमाल चढ्दा आफैं बाटो बनाउनुपर्ने अवस्था थियो । नब्बेको दशकमा केही सहज भयो । २१ औं शताब्दीको प्रारम्भसँगै पहिलै तय भइसकेको बाटो र बिछ्याइएको डोरीलाई पछ्याउने आरोही चुलिए । त्यसैले निर्मलले सगमाथामा खिचेको ट्रफिक जामको फोटो विश्वमै भाइरल भयो । जोर्जीले रेकर्ड यात्रामा नयाँ नौवटा बाटो पत्ता लगाएका थिए । उनलाई मेसनरलेसमेत ‘दोस्रो होइन, महान्’ आरोही भनेका थिए । त्यसैले हुन सक्छ, पोल्यान्डका पर्वतारोहीहरूले निर्मल पुर्जाको सात महिनाको सफलतालाई ठूलो उपलब्धिभन्दा पनि रेकर्डका लागि रेकर्ड मात्रै भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
उनले सात महिनाभित्र आठ हजार अग्ला सबै हिमाल चढ्ने घोषणा गर्दा सबैले शंका गरेका थिए । असम्भव भनेका थिए । उनकै क्षमतालाई लिएर विश्वास गरिएको थिएन । तर, उनले सात महिनामै असम्भवका ती पहाडहरूलाई भत्काएर सम्भव बनाइदिए । आठ हजार मिटर अग्ला १४ हिमाल सबभन्दा चाँडै चढ्ने रेकर्ड त बनाए नै । त्यस क्रममा आरोहणकै अरू ६ रेकर्ड पनि कायम गरे । तीन वटा गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड बनाए । नेपाल पर्यटन वर्ष २०२० अघि उनको सफलतालाई ठूलो उपलब्धिको रूपमा लिइएको छ ।